Mahajanga: Sakoroka mahakasika ny resaka « licence » taxi-Bajaj
lundi, 11 juin 2018 14:31
Nipoaka indray ny korontana ny maraina teo teny amin'ny Voirie municipale Analakely. Namoaka an-keriny ireo Bajaj nogiazan'ny kaominina ny mpamily sy tompona Bajaj voakasika ka izay no nahatonga ny savorovoro.
Nanao « opération licence » ny avy eo anivon'ny Kaominina ambonivohitr'i Mahajanga ka nampiditra « fourrière » ireo izay tsy nanana izany. Araka ny didim-pitondrana navoakan'ny Kaominina volana vitsivitsy lasa izay, dia tsy misy intsony ny famoahana « licence » vaovao fa « remplacement numérique » sisa no azo atao satria efa maro loatra ny isan'ny Bajaj mpitatitra eto Mahajanga.
Mbola misy hatrany anefa ny mpivarotra bajaj ary mbola mandray vola ny any amin'ny sampandraharahan'ny hetra manome ny patanty sy ny eny amin'ny « visite technique » ary maro ireo Bajaj no mampiasa fotsiny ireo antotan-taratasy ireo tsy misy « licence ». Nandritra izao fisavana izao vao nitsikafona avokoa ireo mpanao izany kanefa izao tsy manaiky hanageazana ny bajajiny izao indray.
"Efa noraisin'ny fanjakana ary efa voaloa ny vola tokony ho nefainay tany » hoy ireo tompona Bajaj ireto fa ny Kaominina no tsy mety mandray ny anjarany fa tsy izahay no tsy te hanome. Tokony ho nolavin'ny fanjakana ny volanay raha toa ka tsy hanome « licence » ny kaominina", io ny fanazavana nomen'ny selontenan'izy ireo raha nitafa tamin'ny mpanao gazety.
Nangataka fihaonana tamin'ny Ben'ny Tanàna moa ireto tompona Bajaj sy mpampily voakasika ireto hitadiavam-bahaolana mikasika izany.